🥇 ▷ DeepL, oo ​​ah tan ugu wanaagsan ee turjubaan Google ah, ayaa durba codsi u leh Windows iyo macOS: tani waa sida ay u shaqeyso ✅
DeepL, oo ​​ah tan ugu wanaagsan ee turjubaan Google ah, ayaa durba codsi u leh Windows iyo macOS: tani waa sida ay u shaqeyso
DeepL waa mid ka mid ah tarjubaanada ugu fiican (haddii aysan ahayn kuwa ugu fiican) waxaan ka heli karnaa shabakadda. Sababta ugu weyni waxay tahay inay ka mid tahay kuwa tiro yar awood u leh in lagu falanqeeyo qoraalka iyada oo loo marayo shabakadaha wicitaannada neural, halkii ay ka isticmaali lahaayeen shabakadaha neural-ka ee isku dhafan ee ay adeegsadaan, tusaale ahaan, Google Translator. Thanks to tikniyoolajiyadan iyo adeegsiga qaamuuska luqadaha badan ee u gaarka ah, Linguee, DeepL waxay bixisaa natiijooyin aad u wanaagsan, falanqaynta macnaha qoraalka si sax ah loo tarjunto.
Ilaa maanta, waxaa lagama maarmaan ahayd in la isticmaalo websaydhka ‘DeepL’ si loo gaaro ujeeddadayada tarjumidda, laakiin illaa shalay shirkadda ayaa leh barnaamijka Windows iyo macOS, gabi ahaanba waa bilaash inkastoo haa tahay wali beta. Si kastaba ha noqotee, waan awoodnay inaan caddayn karno, waxaanna horeyba u filaynay in hawlgalku yahay sidii la filayay, wanaag oo dhan.
Tani waa sida barnaamijka DeepL u shaqeeyo
Ka shaqeynta Windows Waa isku mid. Waxaan nuqul ka sameysannaa laba jeer qoraalka turjubaankuna shaqadiisa buu qabtaa.
Xaaladdayadu markay tahay, waxaan ku tijaabinay DeepL on Macbook, laakiin nooca loogu talagalay Windows Waxay lamid tahay heerka hawlgalka. Waxa ugu horreeya waa inaad ka soo dejiso bogga DeepL, oo ​​aad ku rakibtid kumbuyuutarkeena. Heerka guud waa barnaamij gaagaaban, laakiin taasi waa ay fulisaa hawsheeda.
Waxaan helnay sanduuq ugu horeeya oo ay tahay inaan galno qoraalka la tarjumi doono, iyo sanduuq yar oo ka hooseeya halka turjumaadaas lagu muujinayo. Ilaa hadda, qofku wuxuu u malayn karaa in barnaamijka ‘DeepL’ aanu ahayn wax deg deg ah oo loo maro adeegga, laakiin Warka wanaagsan wuxuu ku soo baxayaa heerka isku-darka nidaamka.
DeepL ayaa loo dejiyay taas, adoo riixaya Ctrl + C (ama ⌘C gudaha macOS), qoraalka ayaa si otomaatig ah loogu dhajiyaa oo loo tarjumaa barnaamijka, marka looma baahna in la nuqulo qoraalka, la furo muuqaalka oo la koobiyeeyo, si otomaatig ah ayaa loo sameeyaa. Xaqiiqdii, waad xiri kartaa barnaamijka, waana la furi doonaa kaligiis marka la fulinayo ficilkan.
Sida websaydhka, xaddidaadda ugu weyn ee aan ka helno DeepL ayaa ah kaliya waxay leedahay taageero sideed luqadood, gaar ahaan, waa kuwa hoos ku taxan.
Si kastaba ha noqotee, Saxnaanta turjumaanka wali waa mid aad u fiican, iyo sida asxaabteena Xataka, waxaan ogaan karnaa inay tayadeedu ka wanaagsan tahay tan uu sameeyay Google Translator.
Sidii aan filaynay, barnaamijku wali waa beta, laakiin hawlgalkeedu waa ka saxsan yahay, waxaana kugula talineynaa in lagu rakibo turjumaad deg deg ah. Sida turjubaan kasta, waxaa ku dhaca khaladaad, laakiin waxay weli ka mid tahay aaladaha ugu saxsan markay timaado gaaritaanka hawshan.
Macluumaad dheeri ah iyo soo dejiso | Deepl
La wadaag DeepL, oo ​​ah bedelka ugu fiican ee tarjubaanka Google, ayaa horey u dalbaday Windows iyo macOS: kani waa sida ay u shaqeyso